Kenya oo xabsiga dhigtay askarigii fuliyay dilkii loo gaystay Wiil Somaliyed | Baydhabo Online
Kenya oo xabsiga dhigtay askarigii fuliyay dilkii loo gaystay Wiil Somaliyed
Taliyaha Ciidanka Booliska dalka Kenya ayaa amar ku bixiyay in baaritaan deg deg ah lagu sameeyo dilkii ciidanka Kenya ay xaafadda Islii ugu gasteen laba wiil oo mid ka mid ah uu yahay Somali oo ay ku eedeeyeen in ay ka tirsan yihiin Kooxda Supper Power.Taliyaha ayaa sheegay in falkaasi uu yahay mid laga argagaxo ,madaama ciidanka ay dilka u gaysteen si ka baxsan sharciyadda dalka Kenya.
Waxa uu sheegay in ay xireen askarigii falkaasi gaystay ,islamarkaana ay ku sameyn doonaan baaritaan deg deg ah, maadaama falka toogashada bareerka ah uu gaystay askarigaasi ay tahay arin saameyn weyn yeelatay.
Hay’addaha u dooda Xuquuqul Aadanaha ayaa cambaareeyay dilkaasi oo ay ku sheegeen in uu ahaa xadgudub weyn oo ay ku kaceen Ciidanka Booliska Kenya.
Warbixin ay dhawaan soo saartay Hay’adda u dooda xuquuqul Aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in Booliska Kenya ay dadka dilaan iyagoo aan ku sameyn baaritaan.
Waxaana ay Hay’addu ay sheegtay in ay geysteen 120 dil oo sharciga ka baxsan.
Muuqaalka laga soo duubay Askariga dilka gaystay, ayaa lagu baahiyay Baraha Bulshada, waxaana jawaabaha ka yimid ay noqdeen kuwa aysan jeclaysan dowladda Kenya, maadaama si weyn looga argagax dilka tooska ah ee uu fuliyay askarigaasi ka tirsan ciidanka Kenya.